Akwụkwọ Ozi Jems Dere 5:1-20
Aka ná ntị a dọrọ ndị ọgaranya (1-6)
Chineke na-agọzi ndị na-atachi obi na ndị na-enwe ndidi (7-11)
Ka “Ee” unu kwuru bụrụ ee (12)
Ekpere e ji okwukwe kpee na-akpa ike (13-18)
Mmadụ ime ka onye mmehie kwụsị ime mmehie (19, 20)
5 Ugbu a, geenụ ntị, unu ndị ọgaranya, beenụ ákwá, besiekwanụ ya ike n’ihi ahụhụ unu ga-ata.+ 2 Akụnụba unu alaala n’iyi,* egu* ataakwala uwe unu.+ 3 Ọlaedo unu na ọlaọcha unu ataala nchara. Nchara a ha tara ga-egosi ihe ọjọọ unu na-eme. Ọ ga-alakwa unu n’iyi. Ihe unu kpakọtara ga-adịkwa ka ọkụ n’oge ikpeazụ.+ 4 Ndị ọrụ ndị weere unu ihe ubi na-ebe ákwá maka na unu akwụbeghị ha ụgwọ. Jehova* nke ụsụụ ndị agha anụkwala ákwá ha na-ebe ka e nyere ha aka.+ 5 Unu ebiela ndụ okomoko n’ụwa, unu emeekwala ihe na-atọ anụ ahụ́ unu ụtọ. Unu eriela ihe, buokwa ibu ka ehi na-eche ụbọchị a ga-egbu ya.+ 6 Unu amaala onye ezi omume ikpe, gbuokwa ya. Ihe unu anaghị amasị ya.* 7 N’ihi ya, ụmụnna m, nweenụ ndidi ruo n’oge ọnụnọ Onyenwe anyị.+ Onye ọrụ ubi na-echere mkpụrụ dị ezigbo mkpa ọ kụrụ n’ala. Ọ na-enwe ndidi bido mgbe mmiri malitere izo ruo n’ụla mmiri.+ 8 Na-enwekwanụ ndidi otú ahụ.+ Ka obi kaakwa unu, n’ihi na oge ọnụnọ Onyenwe anyị adịla nso.+ 9 Ụmụnna m, unu atamula ntamu* maka ihe ibe unu mere, ka a ghara ikpe unu ikpe.+ Onyeikpe ga-abịa n’oge na-adịghị anya.* 10 Ụmụnna m, na-emenụ ka ndị amụma ndị kwuru okwu n’aha Jehova,*+ ndị diri ọtụtụ ahụhụ a tara ha.+ 11 Anyị na-asị na ndị tachiri obi+ na-enwe obi ụtọ.* Unu anụla otú Job si tachie obi,+ hụkwa ihe Jehova* mechara mee.+ Unu ejirikwala ya mata na ihe gbasara onye ọzọ na-emetụ Jehova* n’obi, nakwa na ọ na-eme ebere.+ 12 Karịchaa, ụmụnna m, kwụsịnụ ịṅụ iyi. Unu ejila eluigwe ma ọ bụ ụwa ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ṅụọ iyi. Kama ka “Ee” unu kwuru bụrụ ee, ka “Ee e” unu kwuru bụrụkwa ee e,+ ka Chineke wee ghara ikpe unu ikpe. 13 È nwere onye n’ime unu ihe na-esiri ike? Ya na-ekpe ekpere.+ È nwere onye obi dị ụtọ? Ya bụọ abụ e ji eto Chineke.+ 14 È nwere onye n’ime unu na-arịa ọrịa?* Ya kpọọ ndị okenye+ ọgbakọ, ka ha kpeere ya ekpere, teekwa ya mmanụ*+ n’aha Jehova.* 15 Ekpere e ji okwukwe kpee ga-eme ka ahụ́ dị onye ọrịa ahụ* mma, Jehova* ga-emekwa ka ọ gbakee. Ọ bụrụkwa na o mere mmehie, Chineke ga-agbaghara ya. 16 N’ihi ya, na-ekwupụtaranụ ibe unu mmehie unu,+ na-ekpekwaranụ ibe unu ekpere ka Chineke gwọọ unu. Ekpere onye ezi omume na-ekpesi ike na-akpa ezigbo ike.+ 17 Ịlaịja bụ mmadụ ibe anyị, ma o kpesiri ekpere ike ka mmiri ghara izo. Mmiri ezoghịkwa ruo afọ atọ na ọnwa isii.+ 18 O kpekwara ekpere ọzọ, mmiri ezoo, ala emeekwa nri.+ 19 Ụmụnna m, ọ bụrụ na mmadụ emee ka onye ọ bụla n’ime unu hapụ eziokwu, onye ọzọ emeekwa ka ọ lọghachite, 20 maranụ na onye a, nke mere ka ọ hapụ ihe ọjọọ ndị ọ na-eme,+ na-anapụta ya* ka ọ ghara ịnwụ. Chineke ga-agbagharakwa onye ahụ mehierenụ.+
^ Na Grik, “ereela.”
^ O nwere ike ịbụ, “Ihe unu anaghị amasị Chineke.”
^ Ma ọ bụ “emela mkpesa.” Na Grik, “asụla ude.”
^ Na Grik, “guzo n’ọnụ ụzọ.”
^ Ma ọ bụ “na-enweta ngọzi.”
^ Ọ ga-abụ na onye a na-ekwu okwu ya ebe a bụ onye na-esighị ike n’okwukwe.
^ Ọ ga-abụ na ite onye ahụ mmanụ pụtara iji Okwu Chineke nyere ya aka.
^ O nwere ike ịbụ, “onye ahụ ike gwụrụ.”